2 Hawlgallada si uu u badbaadiyo disk adag
2.1 dayactir disk adag
2.2 drive Gadzhiyev oo adag
2.3 Ha ogolaan in drive adag
2.4 U dayactir drive adag
2.5 beddel drive adag
3 Ladnaansho xogta ka nidaamyada / qalabka kala duwan
Recovery 3.5 ah Barzakh,
4 Dhibaatooyinka drive adag
4.1 failure drive Hard
4.2 shil baabuur Hard
4.3 Waxyeello drive adag
4.4 formatted drive adag
HD Recovery ayaa, waxaa ah xijaab adag drive ee drive ee adag ee Mac ah. Waxaa laga heli karaa iyadoo rebooting Mac ka dibna xukunka Command + R hoos ugu riixaya. Mac OS X Libaaxa iyo wixii ka sareeya waxaa ka mid ah feature Recovery ah oo loo isticmaali karo in dib nidaamka qalliinka, dayactiro disk adag ama soo celiyo nidaamka ka gurmad ah. Si aad u soo geli muhiim ah habka soo kabashada, jaraa'id amarka + r marka nidaamka reboots, sii iyaga oo haysta ilaa logo Apple u muuqataa. Hab kabashada waxay leedahay desktop la bar menu OS X iyo suuqa kala OS X Utilities la fursadaha kor ku qoran ah. Waxaad markaa dooran kartaa doorasho aad doonayso inaad ka furmo suuqa danabka ama menu biilasha ku xidhan tahay in aad looga baahan yahay.
Waa maxay HD kabashada caawin kara inaad sameyso
Sidii hore loo soo xusay, HD Recovery ee ku jira qalabka baadhista iyo dhib muhiim ah oo gargaar user ee qamaar uu Mac haddii wax qaldamaan. HD Recovery waxay leedahay sifooyinka soo socda:
Soo Celinta ka Time Machine
Waqtiga Machine waa feature gurmad u gaar ah ee OS X. Time Machine ula socoto ah oo ku saabsan sida aad Mac eegay maalin cayiman oo isticmaala in macluumaadka la soo celiyo aad Mac in maalin kasta oo la doonayo ee la soo dhaafay. Waqtiga Machine hayaa raad raac ah oo maalintii, toddobaadkii iyo xitaa bil ah, laakiin markii baabuur gurmad u buuxsanto, gurmad ugu da'da weyn ayaa la tirtiro si ay u meel dambe u hayaan cusub.
Dayactir Hard drive
Utility Disk waa mid ka mid ah fursadaha ugu muhiimsan ee ku bixiyeen in hab dib u soo kabashada. Habkaani waxaa loo isticmaali karaa si ay u cusboonaysiiyaan drive adag ee aad Mac marka aad dooro "Dayactir Disk" doorasho. HD Recovery sidoo kale sii dayn doonaa inaad raadiso dhib info internet-ka iyo sidoo kale ka saar waxyaabaha uu drive adag oo ku celin ka Machine Time ah dib.
Ku rakib / uninstall Mac OS X
Tani waxay sidoo kale waa feature weyn ay bixiyaan HD Recovery ah. Isticmaalka habkaani aad kala soo bixi kartaa version aad la doonayo ee OS X ee internet-ka iyada oo aan u baahan in nooc kasta oo indhaha disk. Laakiin sida iska cad, waayo, habkan in ay ka shaqeeyaan, waxaad u baahan tahay in la xiran internetka.
Sida loo soo celiyo aad Mac isticmaalaya HD soo kabashada
Si aad u soo celin aad Mac isticmaalaya HD Recovery, raac tallaabooyinkan:
Si ay u helaan HD mugga Recovery ka, guuleysatey aad Mac halka cadaadinaya amarka iyo R furayaasha ilaa logo Apple u muuqataa.
Waxaad arki doontaa oo kaliya OS X interface aad u aasaasi ah oo dariishad OS X Utilities. Dooro Disk Utility ka furmo suuqa iyo weeraray "Continue".
Laga soo bilaabo suuqa kala Disk Utility, dooro tab Aid First ka dibna riix icon ee drive boot adag. Haddii aad drive boot adag tahay Recovery tusaale ahaan, guji drive adag calaamadeeyay Recovery iyo dooro "Dayactir Disk".
Waxay qaadan doontaa waqti yar si aad u Mac si aad u hesho dhammaan ogaanshaha iyo dhib nidaamka socda laakiin Wuxoogaa yar dabadeed waxaad arki doontaa muuqaalka kore ee suuqa kala kuu sheegaysa in drive ayaa waxaa cusboonaysiiyey.
Jooji Disk Utility by doorashada Utility Disk → Jooji Disk Utility, adigoo riixaya Command + Q, ama adigoo gujinaya gumdrop Window Close cas ka dibna reboot nidaamka iyo laabto shaqadaada.
Dhibaatooyinka iyo dhib u Recovery HD
Recovery HD ee Ujeedadu waa in ay caawiyaan dadka isticmaala inta badan ka soo Baxaan dhib ay bixisay OS X, laakiin waxa aad ka mid ah ma ka heli kartaa HD Recovery laftiisa ama HD Recovery laftiisa waxaa soo bandhiga dhibaatooyinka? Waa hagaag, mid ka mid ah wax in aad waa in aan si dhab ah in la sameeyo waxaa cabsi gelin. Maqaalkani waxa uu tixgelinayo dhibaatooyin caadi ah oo la Recovery HD laftiisa iyo wuxuu kuu sheegayaa sida ay is ogow iyaga ka mid ah ee kala qaybsan.
HD Recovery xiran yahay
HD Recovery heli kartaa mararka qaarkood xiran oo lagu qorey muuqaalka fariin qalad ah ayaa sheegay in, "Hard Drive qufulan". Si aad uga takhalusi dhibaato this, si fudud u tagaan oo ay u utility disk, guji drive adag ka dibna riix 'awood journaling' in lagu furo drive ka.
HD Recovery tusiya doesn`t ilaa
Recovery HD ma muujiyaan aan kor haddii aad formatted aad idil drive adag. Si aad u soo dib, waxaad u baahan doontaa in a Time gurmad Machine xogta ka wadid aad u adag ka hor inta formatting ka dhacay. Soo celinta OS ka gurmad in dib waxaad ka heli doontaa adiga oo OS halka si aad u hesho HD Recovery ka dib waxaad u baahan doontaa in uu ordo yar ah rakibi aad OS isticmaalaya Mudanayaasha a internet ama disk ka. Waxaa dib HD Recovery si aad Mac soo celin doonaa.
Apple Mac OS X El Capitan 10.11 vs. MAC OS X Yosemite 10,10
MKVtoolnix u Mac: An Application Easy ayeey u Users All Mac
> Resource > Mac > Soo Celinta Mac iyadoo la kaashanayo Recovery HD